एकीकृत समाजवादीलाई केही सुझाव र अपेक्षा ! - Bulbul Samachar
एकीकृत समाजवादीलाई केही सुझाव र अपेक्षा !
bulbul आइतवार, कार्तिक २८ गते 132 views
नेकपा(एकिकृत समाजवादी)पार्टीको जारी केन्द्रिय कमिटीको दोस्रो वैठकमा मेरो केही सुझाव र अपेक्षा:
१,करिव ७ दशक लामो संघर्ष र प्राप्तिको आन्दोलनको निर्मम समीक्षा होस् । कहाँ हामी सफल भयौं, कहाँ असफल भयौं । प्राप्त सफलताको ऐतिहासिकतालाई परिस्कृत गर्दै लैजाने र गलत भएको ठाँउमा ईमान्दारिताका साथ जनताको अगाडि माफी माग्ने।
२,आज हामी कहाँ छौ? पार्टी गठवन्धन हुँदै एकता हुने, सवैतिर सत्तामा, त्यो उचाईको जनमत र क्रमश: पार्टी विभाजन जनमत खण्डित र कम्युनिष्ट आन्दोलनको यो किसिमको विल्लिवाठ कसरी भयो? हामी खाली वलीलाई या अन्य कुनै शक्तिलाई दुत्कारेर खास समस्या खोज्न ईन्कार गरेको झै नगरौं । हामी सवैले गणतन्त्र, परिवर्तन र समृद्धिको मात्र गफ गर्यौं । क्रान्तिवाट प्राप्त उपलबध समाधान नहुँदै राजनैतिक संक्रमणमा नजानिदो ढंगले एउटा वर्ग जन्मिने र संगठित हुने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्‍यौं । र त्यो सत्ताच्युत भएको पुरातन शक्ति र पूँजीपतिहरुको गठजोड वन्दछ।यो रुपमा कम देखिन्छ तर सारमा सवैतिर यो हुन्छ । एउटा उपयुक्त समयको पर्खाईमा सुशुप्त अभियानमा हुन्छ र यस्लाई हामी दलाल पूँजीपति वर्ग वा चरित्र भन्छौं ।
यही वर्ग हामी र हाम्रो आन्दोलनको प्रमुख वाधक हुन् । यिनको पहिचान र निर्मुलिकरण विना समाजवाद संभव छैन। यो समग्र प्रक्रियामा हामी प्रष्ट छौ भन्ने सैद्धान्तिक-राजनैतिक दृष्टिकोण र वाटो देखिने वुझिने गरि सारा दुनियालाई वताऊँ।
३, विद्रोह गरेर वनाएको हाम्रो पार्टीलाई जनताले किन साथ दिने?वुझिने गरि वताउँ र देखिने गरी कार्यान्वयनको गहिरो र विश्वासिलो प्रतिवद्वता जनाऊँ।हाम्रो वर्गहितका लिखित योजना सार्वजनिक गरौं । नसक्ने हावादारी गफ होईन, स-सानाकामले जवताको जीवन जोड्न सकिन्छ।
४,विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन कसरी रक्षात्मक भयो र यस्मा हाम्रो के सम्वन्ध छ? भारत र चिन या अन्य शक्तिराष्ट्रसंग लुकाछिपी होईन खुल्लमखुल्ला हाम्रो स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र परस्पर सम्वन्धको प्रष्ट अडान, दृढता र धारणा सार्वजनिक गरौं ।
५,हामी अधिकांश कम्युनिष्टहरु समाजवाद भन्यौ, के यो व्यवस्था अमुर्त हो? कसैले हामीलाई उपहार स्वरुप दिदैछ? कि यसै आउँछ?यस्को मुल वाधक के हो र यस्को प्रवृति कस्तो हुन्छ?
हो, हामी समाजवादको धेरै रटान लगाउँछौं तर पूँजीवादको वारेमा कहीँ वोल्दैनौं । पूँजीवाद या भनौं दलालपूँजीवादको सहि विष्लेषण नगरी हामीले भन्ने समाजवाद अपूर्ण हुन्छ, अझै भनौं संभवनै छैन।जताततै दलाल पूँजीवादको प्रभाव छ। एउटा ठूलो संजाल तयार छ र त्यस्ले पानी देखि जनताको सवै आवाश्यकता र राज्यको दायित्वलाई नराम्ररी गाँजेको छ। तसर्थ दलाल पूँजीवादलाई नियन्त्रण गर्दै, राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने त्यो उचाईको ज्ञानसहितको एउटा ठूलो पंति तयारमा लागौं । पार्टी कार्यकर्ता निर्माणलाई यसरी हेरौं । संख्यामात्र भन्दापनि समाजवादको प्रतिवद्वतालाई अलि वेशी खोजी गरौं । जव हामी यस्तो कुरा वोक्छौ,हाम्रो राजनितिको प्रमुख क्षेत्र वर्गीय हिसावले गरिव,किसान, मजदुर, दलित, महिला(जो राज्यको मूल प्रवाहवाट टाढा छन् या विभिन्न प्रकृतिको विभेदको सिकार भैरहन वाध्य छन)हामीसंग हुनेछन् । जव यो पंतिलाई हामी संगठित गर्दै हाम्रो उद्देश्य,लक्ष्य र गन्तव्य पुग्न तम्तयार गर्नेछौ तव हामी दैनिक अरुलाई गाली गर्नै पर्दैन हाम्रै ऐजेण्डा र कार्यक्रम वताउने समय थोरै हुँदै जानेछ। हाम्रो भाषणमा ताली वज्ने छैन तर यथेष्ट गंभिर्यता पाइने । हुटिङ हुने छैन तर धैर्यता र निरन्तर संघर्षलाई वोध हुनेछ । नेताको जयजयकार हुनेनै छैन किनकि मात्र समाजवाद र त्यस्को आधारहरु आकासवाट चिलले जसरी देख्न थाल्नेछन र व्यक्ति गौण र आन्दोलन मुख्य मान्नेछन् । कम्तिमा सवै जनता श्रममा जोडिने छन् अनि असाध्यै छिटो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई हाम्रो पंतिले योगदान गर्नेछ। जव राज्यमा आफ्नो प्रत्यक्ष योगादान सहितको भूमिका देख्नेछन् । हामिले संगठित गरेको त्यो पार्टी र संगठनले जवरजस्त हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आउनेछ र त्यही पंतिले राज्यसत्ताको स्वरुपलाई वर्गीय वनाउँनेछ र त्यो नेपालीजनताको आधरभूत वर्ग हुनेछ ।
यो सवै विषयमाथि गहिरो चिन्तन सहितको निष्कर्ष निकालौं ।
अव केपी वलीलाई गाली गरेर समावादी आन्दोलनको,लक्ष र त्यो महान उद्देश्यको हुर्मत नलिओैं।
र अन्त्यमा पार्टी पुस्तान्तरणको रोडम्याप प्रष्ट देखाओैं, युवामैत्री पार्टी वनाउन संकल्प गरौं । युवा धेरै बाँच्दछन् र राज्यलाई धेरै योगदान पनि गर्नसक्दछन् ।
हार्दिक अभिवादन सहित!
(विश्वकर्मा नेकपा एकीकृत समाजवादी म्याग्दीका अध्यक्ष समेत् हुन्)
पाण्डेले गरे पर्वतको एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन विरुद्ध उजुरी !
अनेरास्ववियू बाग्लुङको अध्यक्षमा पौडेल !